SP-L04 SOICARE 400ml huni zviyo inotonhorera-mhute Magetsi ultrasonic yakakosha mafuta diffuser, China SP-L04 SOICARE 400ml huni tsanga inotonhorera-mhute Magetsi ultrasonic yakakosha mafuta diffuser Vagadziri, Vatengesi, Fekitori - Sunpai Industries Limited
SP-L04 SOICARE 400ml huni zviyo inotonhorera-mhute Magetsi ultrasonic yakakosha mafuta diffuser
SOICARE 400ml huni tsanga inotonhorera-mhute Magetsi ultrasonic yakakosha mafuta diffuser
· Chipo Chakanakisisa 5-IN-1 AROMATHERAPY DEVICE: Iyi ultrasonic yakakosha mafuta diffuser chishamiso multifunction aromatherapy mudziyo kusiyana nechero ipi yawakamboshandisa. Inoratidzira yakakura uye yakapusa kuchenesa 400ml tangi remvura, 7 akasiyana LED mwenje mavara, akawanda mhute anoparadzira modes, pamwe nekuchengetedza auto-switch inoitadzisa kubva pakupisa zvakanyanya kana ikabuda kunze kwemvura.
· ZVIKURU AROMATHERAPY DIFFUSER: Kunze kwekushandisa kwayo mune aromatherapy, ichi chakakosha mafuta diffuser inoshandawo seyekunyaradza. Iishandise kuvandudza mamiriro emhepo epamba pako, kufukidza hwema hwezvipfuyo kana kusvuta, uye kukudzivirira iwe mhuri kubva kune yakanyanyisa kuoma mweya, static magetsi uye nezvimwe!
· PREMIUM QUALITY MATERIALS: Kana zvasvika kune yedu yekutanga yakakosha mafuta diffusers, isu tinoita poindi yekushandisa chero chinhu kunze kweiyo yakafanana Ultra-yakakwira giredhi, yakachengeteka, uye eco-inoshamwaridzika PP zvinhu zvemabhodhoro evana zvinogadzirwa kubva, pamwe nehurumende-ye- iyo-yeanogadzira ekugadzira maitiro uye akaomarara mhando kutonga
· CHIPO CHIKURU CHIDZIDZO CHEMWE WESE: Kana iwe uri mumusika wechipo chakanaka uye chinoshanda, unogona kumira kutarisa. Iyi hombe aromatherapy yakakosha mafuta diffuser ipfungwa inofungidzira uye inobatsira, iyo iyo munhu wese anogona kubatsirwa nayo. Nesanganiswa yemavara, dhizaini uye mashandiro akadaro, ndeye yakavimbiswa hit!
Wood huni yakakosha mafuta diffuser
Kusvikira ku12 awas
SP-G03B 180ml bamboo girazi yakakurumbira acorn chimiro chimiro chinonhuwira
SP-E004 Rechargeable Mvura isina Aromatherapy Aroma Nebulizer